Ive nekuchengetera nemabutiro aunoisa pane yako inopenya nhema nhema 7 | IPhone nhau
Ive nekuchengetera nemabutiro aunoisa pane yako inopenya nhema nhema 7, inogona kurasikirwa chinyorwa kumashure
Pamwe haisi iyo -gate gore rino, asi hazvisi nekuti Apple inonyevera kuti panogona kuve nezvinetso pawebhusaiti yayo. Tiri kutaura nezvazvo iPhone 7 inopenya nhema kana jet nhema uye yekumaka matambudziko ayo anogona kutambura neayo inopenya casing. Asi dambudziko ratinozotaura nezvaro nhasi harinei nechekuita nema microabrasions ayo Apple inotaura nezvayo, kana asiri iwo mavara akapenya akapenya mutema iPhone 7 kumashure.
Kuverenga kuraira kwaApple, zvinoita senge zvine musoro (kunyangwe ini ndichibvuma kuti hazvisi) ndizvo chengetedza nerudzi rwekuvhara, asi mushonga unogona kunge wakaipisisa kupfuura chirwere: zvimwe zviitiko zvinodzivirira iyo inopenya nhema dema iPhone 7 kune aya ma micro-abrasions akasungirirwa kwazvo parunhare zvekuti rugwaro ruri kuseri kwechigadzirwa runogona kudhindwa pane dziviriro iyo yanga iri yaishandiswa kudzivirira mamwe marudzi ematambudziko, sezvaungaona muvhidhiyo inotevera.
Glossy nhema iPhone 7 inotarisana nerimwe dambudziko
Iyi Yakajeka iPhone 7 Dambudziko Nyowani Yakawanikwa nevashandisi veMacRumors foramu, uko vashoma vashandisi vakacherekedza iwo mavara senge "Yakagadzirwa neApple muCalifornia" inopfuura kuchengetedza, zvinoreva zvakare kuti iPhone chinyorwa chakakanganiswa.
Mamwe ese mamodheru, seaya emakore apfuura, haapi dambudziko iri. Kunyangwe isu tichifanira kumirira kuti tione kuwanda kwedambudziko, zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti zvine chekuita nekwakanyorwa chinyorwa. Panyaya yevatema, vakamuka goridhe, goridhe uye sirivheri modhi, Tinogona kutaura kuti chinyorwa ichi chakadhindwa zvakananga paaluminium, apo chiri paJet Nhema modhi Iyo inodhindwa mune anodized yeakasiyana.
Dambudziko iri rakubata here kana kuti uri kunetseka kuti rinogona kudaro
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Ive nekuchengetera nemabutiro aunoisa pane yako inopenya nhema nhema 7, inogona kurasikirwa chinyorwa kumashure
Samsung inoedza kudzikisira moto weGlass Note 7 nemari
Gboard, iyo Google keyboard zvino inoenderana neiyo 3D Kubata